Guddiga Olombikada Soomaaliyeed oo doortay hoggaan cusub
Home Somali News Somali Government Guddiga Olombikada Soomaaliyeed oo doortay hoggaan cusub
Munaasabad maanta ka dhacday magaaalada Muqdisho ayaa guddiga Olombikada Soomaaliyeed ee GOS waxa ay ku doorteen guddoomiye cusub iyo xoghaye.
Doorashada guddiga oo isku soo taagay Cabdulaahi Axmed Tarabi oo ka tirsanaa xiriirka Olombikada Soomaaliyeed ayaa markii dambe codka isaga loogu shubay.
Sidoo kale waxa goobta lagu doortay seddax ku xigeen oo kala ah: Axmed Cabdi Xasan Wataac, Xasan Elman iyo Ibraahim Abuukar Shaamow.
Waxa kaloo guddiga Olombikada Soomaaliyeed oo ka kooban illaa 18-xiriir ay doorteen xoghayaha xiriirka Olombikada Soomaaliyeed, kaasoo loo doortay Duraan Axmed Faarax oo horrey u ahaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga Olombikada Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha cusub ee la soo doortay ayaa xilka heyn doona afarta sanno ee soo socota sida uu dhigaayo sharciga u yaalla guddiga Olombikada Soomaaliyeed ee GOS.
Dhinaca kale waxa jira dad dhaliilsan qaabka ay u dhacday doorashada oo isku soo taagay hal qof isla markaana aysan jirin cid la tartantay.
Waxa kaloo bahda Sports-ka ay ka andoocanayaan sababta keentay in doorashada guddiga Olombikada laga soo hormariyay xilligeeda, laakin dad kale ayaa aaminsan in tan iyo markii uu dhintay Allaha u na xariistee Aadan Yabarow Wiish in xilkaas uu bannaanaa.
Waxa doorashada ka soo qaybgalay xiriirada ciyaaraha ee ka jira Soomaaiya, wasiiro ay ka mid yihiin wasiir ku-xieeganka horrumarinta iyo adeega bulshadda Bashiir Goobe iyo aggaasimaha wasaaradda dhallinyarada iyo Sports-ka Aweys Sheekh Xadaad, guddoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, marti sharaf kale oo lagu casuumay doorashada iyo warbaahinta.
AKHRISO: M/ Racfaanka oo muddo cusub u qabatay dacwada loo heysto C/raxmaan C/shakuur